“Ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus waxay faa’iido weyn u tahay kubada cagta dalka Italy”… Marcello Lippi – Gool FM
“Ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus waxay faa’iido weyn u tahay kubada cagta dalka Italy”… Marcello Lippi
(Juventus) 09 Luulyo 2018. Waayeekja reer Talyaani Marcello Lippi ayaa wuxuu xaqiijiyay in ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus suuqan xagaaga in wax wayn ay kusoo kon dhin doonto kubada cagta dalka Talyaaniga.
Waxaa siii kordheysa wararka ku aadan in Cristiano Ronaldo uu kusii dhawaanayo ku biirista kooxda reer Talyaani ee Juventus xili ciyaareedka soo aadan.
Macalinka waayeelka ah ee reer Talyaani Marcello Lippi ayaa wuxuu kala hadlay arintan saxaafada kahor inta uusan dhicin heshiiska Juventus ay ku dooneyso saxiixa Cristiano.
“Waan ogahay in ciyaartoyda Juventus ay yihiin kuwo aad u caqli badan, ma aysan fiirin mushaarka uu Cristiano Ronaldo ka qaadan doono kooxda, sababtoo ah si fiican ayay u ogyihiin in kabtanka reer Portugal uu yahay ciyaaryahan aan caadi ahayn”.
“Cristiano Ronaldo waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka, waa ciyaaryahan xirfad wanaagsan leh, waana mid cajiib ah”.
“Wuxuu awoodaa inuu ciyaaro afar sano kale, waana hubaal inay faa’iido weyn u noqon doonto kubada cagta dalka Talyaaniga oo dhan ee kaliya ma ahan Juventus”.
Emre Can oo la dhacsan inuu ka garab ciyaaro Ronaldo
Robert Lewandowski oo badalay go'aankii uu uga tagayay Bayern Munich (Maxaa soo kordhay?)